Fantastic Beasts ရုပ်ရှင် ၅ ကားကို မတူညီတဲ့ မြို့ ၅ မြို့မှာ ဇာတ်အိမ်တည်မည် - MoviesFan
Fantastic Beasts ရုပ်ရှင် ၅ ကားကို မတူညီတဲ့ မြို့ ၅ မြို့မှာ ဇာတ်အိမ်တည်မည်
J.K. Rowling နဲ့ Warner Bros တို့က Fantastic Beasts ဇာတ်လမ်းကို စုစုပေါင်း ဇာတ်ကား ၅ ကားခွဲပြီးထုတ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့တာကတော့ ဇာတ်ကား ၅ ကားလုံးဟာ မတူညီတဲ့မြို့ ၅ မြို့မှာဇာတ်အိမ်တည်ကြမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Fantastic Beasts and Where to Find Them ဟာ New York မြို့မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားခဲ့ပြီး မကြာမီထွက်ရှိမယ့် Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ကို Paris မြို့မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကို Harry Potter နောက်ဆုံး ၄ ကားနဲ့ Fantastic Beasts ၂ ကားလုံးကို ဦးဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ David Yates က Entertainment Weekly နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်က အတည်ပြုပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“Yes,” Yates replied when asked if each film is set inadifferent city. “Jo’s already told us where the next one is taking place. It’s very exciting. This isaglobal story, ultimately. And given that there’saglobal audience for this, it’s all the more delightful to take the story to different parts of the world.” EW
Yates ဟာ သူ့အနေနဲ့ Fantastic Beasts ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပရိသတ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ကနေရာတွေမှာရိုက်ကူးမယ့်အချက်ကို တော်တော်သဘောကျမိကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ Yates ပြောကြားသွားပုံအရဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ တတိယမြောက် Fantastic Beasts ဇာတ်ကား ဇာတ်အိမ်တည်မယ့်နေရာကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလို့မရသေးတဲ့အတွက် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲဒီလောက်ပဲအရိပ်အမြွက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကိုသိရှိကြပြီးတဲ့နောက် လူတွေက နောက် Fantastic Beasts ဇာတ်ကားတွေဇာတ်အိမ်တည်မယ့်နေရာတွေကို ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထင်ကြေးအပေးခံရဆုံးနေရာကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ super villain ကြီး Grindelwald က Nazi ရယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရယ်နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Rowling ပြောကြားထားချက်အရဆိုရင် ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာ Dumbledore နဲ့ Grindelwald တို့ duel ဆွဲကြမှာဖြစ်ပြီး Grindelwald ရှုံးသွားတဲ့နေ့ရက်ဟာ ဂျာမနီစစ်ရှုံးနဲ့နေ့ရက်နဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ၅ ကားမြောက် Fantastic Beasts ဇာတ်ကားဟာ ဂျာမနီမှာဇာတ်အိမ်တည်ရင်တည်၊ မဟုတ်ရင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်စပ်နေမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ နောက်ထပ်ထင်ကြေးပေးခံရတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ လန်ဒန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လန်ဒန်ဟာ Potterverse မှာအရေးအပါဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနှစ်ခုကလွဲပြီးတော့ ကျန်တဲ့နေရာတွေကို ဘယ်သူမှရေရေရာရာမပြောနိုင်ကြပါဘူး။
ကဲ.. စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုမြင်ကြသလဲ.. ကျန်ရှိသေးတဲ့ Fantastic Beasts ၃ ကားထဲက တစ်ကားကားက အာရှဖက်မှာဇာတ်အိမ်တည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား.. ဘယ်လိုပဲပြောပြော Rowling ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့အချိန် ကိုယ်မှန်းထားတာနဲ့ကိုက်မကိုက် အဖြေညှိကြည့်လို့ရအောင် နည်းနည်းလောက်စဉ်းစားထားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ကို ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: Daniel Radcliffe ကို ဆေးမှောင်ခိုသမားအဖြစ်မြင်ရမယ့် ‘Beast of Burden’ Trailer
Next Post: ‘Justice League’ Blu-Ray အကြောင်းကြေညာ – Zack Snyder Cut မပါဝင်